Saddex kooxood oo ku loolamaya sidii ay Premier League ku sii joogi lahaayeen - BBC News Somali
Saddex kooxood oo ku loolamaya sidii ay Premier League ku sii joogi lahaayeen
17 Abriil 2016
Image caption Tababarahee ay kooxdiisa sii joogi doontaa Horyaalka Ingiriiska xagaaga soo socda?
Kaddib guushii ay kooxda Newcastle United ka gaartay kooxda Swansea, oo ay sii xigtay guushii la yaabka laheyd ee Sunderland ay ku dubatay kooxda Norwich, ayaa waxaa sii adkaaday tartanka ay kooxahaasi ugu jiraan sidii ay xagaaga soo socda ku sii joogi lahaayeen Horyaalka Ingiriiska.
Sunderland ayaa waxa ay hal dhibic ka hoosaysaa kooxda Norwich oo ku jirta kaalinta 17-aad ee shaxda kala horreynta Horyaalka, hasayeeshee hal ciyaar ayaa u harsan kooxda lagu naanayso Mukulaalaha Madow.
Tababaraha Sunderland, Sam Allardyce, ayaa sheegay in kooxdiisa ay u baahan tahay in ay badiso shanta ciyaar ee uga harsan horyaalka, maadaama haddii laga badiyo ay saameyn ku yeelan karto halgankooda.
Newcastle ayaa laba dhibcood waxa ay ka hoosaysaa kooxda Sunderland, waxyar ayeyna kor u soo kaceen kaddib markii ciyaaryahanada kooxdaasi ay ka jawaabeen dalabaadkii tababarahooda Rafael Benitez ee aheyd in ay ciyaar wanaagsan muujiyaan, waxa ayna 3-0 ku dubteen kooxda Swansea City.
Labada kooxoodba waxa ay daba ordayaan kooxda Norwich oo sida uu sheegay tababarahooda Alex Neil aanan walaac ka qabinba sida ay u dheelaan balse ay diiradda saarayaan in ay guul gaaraan un.
Haddaba tababarahee xagaaga soo socda ay kooxdiisu sii joogi doontaa Horyaalka Ingiriiska?
Waa su'aal da'weyn balse tababarekastaa waxa uu ku dadaalayaa sidii ay kooxdiisa uga sii mid ahaan laheyd kooxaha ka dheelaya Horyaalka Ingiriiska.